သတင်း - အလိုအလျောက် ကားဆေးနည်းကို အသုံးပြုနည်း
A CBK Touchless Car Wash စက်ပစ္စည်းများသည် ကားရေဆေးလုပ်ငန်း၏ တိုးတက်မှုအသစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ကြီးမားသော စုတ်တံပါသော စက်အဟောင်းများသည် သင့်ကား၏ ဆေးသုတ်ခြင်းကို ပျက်စီးစေသည်ဟု သိရှိထားသည်။CBK Touchless ကားရေဆေးခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ ကားကို အမှန်တကယ်ဆေးကြောရန် လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလိုအလျောက် Touchless စနစ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် ဤပြဿနာကို တိုက်ဖျက်ရန် တီထွင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ထိတွေ့မှုမဲ့ ကားဆေးခြင်း၏ အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။
1. သင့်ကားသည် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာထဲသို့ ဝင်လာသောအခါ၊ မြေပြင်ဖြန်းဆေးကို ဖွင့်ထားပြီး ကိုယ်ထည်အား ဖိအားမြင့်အောက်တွင် သန့်စင်ထားသည်။သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ ယာဉ်ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များအားလုံးကို ပိတ်ပါ။
2. စက်ပစ္စည်းကို အသက်သွင်းထားပြီး၊ ယာဉ်ကိုယ်ထည်ကို ဖိအား 360 ဒီဂရီဖြင့် ဆေးကြောပါ။
3. ထို့နောက် ပက်ဖြန်းထားသော ကားဆေးရည်၊ ရေဖယောင်းအပေါ်ယံပိုင်းနှင့် လေအခြောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းပါ။
ကားရေဆေးခြင်းစတင်သောအခါ၊ ယာဉ်၏ယာဉ်မောင်းအနေဖြင့်၊ ဤအချိန်အတွင်း သင်ဘာမှလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။အလိုအလျောက်ကားရေဆေးခြင်းများသည် အသံကျယ်နိုင်ပြီး သင့်ကားပေါ်မှ ရေဂျက်လေယာဉ်များသည် သင့်ကားပေါ်မှအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ရွေ့လျားနေသဖြင့် သင့်ကားသည် အနည်းငယ်တုန်ခါသွားသည်ကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။
ဤစနစ်များသည် အလွန်တိကျပြီး လူ၏အကူအညီဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်ထက် တစ်နာရီလျှင် အများအပြားလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကားရေဆေးခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးပါသည်။
ထရပ်ကားများအတွက် အလိုအလျောက် ကားရေဆေး အလိုအလျောက်ကားရေဆေး ကားရေဆေးဖိအားပေးစက် ထရပ်ကားများအတွက် Touchless Car Wash Touchless Car Wash လုပ်ငန်း Touchless Car Wash